यसरी कोरोनालाई जिस्क्याउँदा, कसलाई होला फाइदा ?
भिडभाड छ, मास्क छैन अनि शारिरीक दुरीको वास्तै छैन ।
आश्विन १४, २०७७ लक्ष्मी खरेल
बारा करैयामाई गाउँपालिका घर भई कामको शिलशिलामा बीरगंज बस्दै आएका धिरज चौधरीले ४ दिन अघी विहेभोजमा सहभागी भएको कुरा साथीलाई सुनाए ।
जो जसलाई भेटे सबैलाई विहेमा थरीथरीका व्यञ्जन खाएको, नाच्दै खुब रमाइलो गरेको, नयाँ नयाँ साथी बनाएको कुरा सबैलाई सुनाएर आफु रीफ्रेस भएको सुनाईरहेका छन् ।
सुरुवातमा मास्क नछोड्ने कपडा व्यापारी ललीता देवीलाई आजकाल मास्क लगाउन मनै लाग्दैन रे । नजिकींदै गरेको दशैंले तातेको बजारमा अनेकन व्यक्तिहरुसँग बार्गेनिंग गर्नुपर्ने ललीताले मास्क लगाउँदा गर्मीले उकुसमुकुस बनाउने, ग्राहकलाई कुरा बुझाउन समस्या हुने र कोरोना संक्रमण रोक्नमा पनि खासै भुमिका नखेल्ने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छिन् “सरकार जेङे कहलख ओहिंगइ सब करेवाला, मास्क नाछोडेवाला, दुर रहके बतीयाएवाला, हर कोसीस करेवाला लोगके देखनी कोरोना लागल तब का होई मास्क? मास्क कोरोनाके रोकी ?” भन्दै मैलीएको फ्याँकीएको मास्क उठाउँदै प्रश्न गर्छीन ।
सुष्मिता चौंलागाईंले आफु एक्लैले चाहेर मात्रै शरिरीक दुरी कायम गर्न निक्कै अफ्ठ्यारो भएकोले त्यस बारे सोच्नै छोडेको बताईन् । दिनरात समुदायमा गएर अनेकन व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्नुपर्ने सुष्मितालाई कतै फोन गर्दा बज्ने कोरोना सन्देश सुन्दा कोरोनालाई गिज्याएको जस्तो लाग्छ रे ।
उनि भन्छिन् “समुदाय र बजारमा मानिसहरुको चहलपहल हेर्दा त्यो सन्देश बेअर्थको छ, लकडाउनमा प्रहरीको डरले मात्रै सबैले मास्क लगाएको, सरकारले थाहा पाउला की भनेर मात्रै उत्सव नमनाएको जस्तो लाग्छ, कोरोनासँग लड्ने चाह भए त अहिले पनि लकडाउनका बेला जस्तै सचेत हुनुपर्ने । सबैले नगर्ने, एक्लैले गरेर नहुने त्यसैले देश अनुसारको भेष झैं मैले पनि अरुले जस्तै जमघटमा सहभागी हुनेगरेको छु ।”
महामारीको चपेटाले जागिर गुमाएका पर्सागढीका सिताराम कुमार दिनभरी तास खेलेर समय काट्ने गरेका छन् । तास खेल्ने साथी खोज्दै उनी गाउँभरी डुल्छन् अनि जाहाँ साथीहरुको झुण्ड भेट्छन् त्यहीं आफ्नो डेरा जमाउँछन् ।
जो भेटीयो ति सबैसँग दिन भरी तास खेल्छन्, भन्छन् “कती सुत्नु ? जागीर गुमेको तनावका बिच सुतेर ढाड दुखाउनुभन्दा अहिले तासको आनन्द लिएर बरु कोरोना लागे सहुँला ।” भन्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।
उल्लेखित प्रतिनीधी पात्रलाई सुन्दा अति आवश्यक काम बाहेक पनि विवाह, जन्मोत्सव लगाएतका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, र सहभागी हुनेहरुको यस्ता खाले चर्चाले लकडाउन खुकुलो भएसँगै सबैजसोले आफु स्वतन्त्र भएको महसुस गरेको भान हुन्छ । नजिकिएको दशैं र फेरी लकडाउन हुन्छकी भन्ने त्रासले पनि रमाइलो र जमघट गर्ने गरेको धेरैकोे भनाई छ ।
लकडाउनका समयमा चुस्त रहेर कसी लाउने सम्बन्धित निकायले हालको समयामा खासै रोकटोक गरेको देखिन्न जस्ले गर्दा विना मास्क भिडभाड यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छ । अहिले शहरबजारमा भीडभाड अत्यधिक बढेको छ । भीड बढेसँगै कोरोना संक्रमित पनि बढेका छन् । मृतकहरु दिनहुँ थपिइरहेका छन् । यसको कारण हो माहामारीलाई मजाकका रुपमा लिनु ।
अहिले धेरैले भो पुग्यो अब लकडाउन । कोरोना केही पनि हैन रहेछ । पचाउन सकिने रुघाजस्तै रहेछ । बेकारमा आत्तिने कामै छैन । दीर्घरोगीहरुले मात्रै सतर्क भए पुग्नेरहेछ । मास्क र स्यानिटाइजर लगाउने, आर्थिक क्रियाकलाप जारी राख्ने ।
जसलाई कोरोना लाग्छ, उसको उपचार गर्दै जाने र अरुले आफ्नो दैनिकी विगतको जस्तै जारी राख्ने भनिरहेकाछन् भने केहिले कोरोनासँग जिस्कन नहुने बताइरहेका छन् । किनभने, नेपालमा मृत्युदर पनि बढिरहेको छ ।
लक्षणसहितका संक्रमित पनि बढेका छन् । युवा र निरोगीहरु पनि मर्न थालेका छन् । भाइरस लोड पहिलेको भन्दा कडा देखा पर्दैछ । आगामी हिउँदमा नेपालको स्थिति इटालीको जस्तै बिकराल हुन नसक्ला भन्न सकिन्न यसर्थ सावधान हुन जरुरी छ ।
यसबारेमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले आम जनतामा स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जुुन नुहँदा बुझाइमा एकरुपता आउन सकिरहेको छैन । नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरु नै दुई भागमा देखिन्छन् । आम मानिसको नजरले हेर्दा कोरोना केही होइन भनौं भने युवा र निरोगी मानिसहरु समेत मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।
केही हो भनौं भने लकडाउन लाउने नलाउने दोधारमा सरकार अनि लकडाउन खुकुलोको बेलामा सर्वसाधारणले कोरोनाबाट बच्ने सन्देशको खिल्ली कहिलेसम्म उडाउने ? यस्तो लापरवाहीले सबका लागि कहिलेसम्म त्रास बढाउने ?
यसरी ख्याल ठट्टा गर्दै कोरोनालाई जिस्क्याउने हो भने फेरी विगत झै भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
#वीरगंज महानगरपालिका #स्थानीय निकाय #स्वास्थ्य #कोरोना त्रास
बुधवार, आश्विन १४, २०७७, ०१:०९:००